Musharax Cabdiraxmaan Ciro Oo Khudbad U Jeediyey Taageerayasha Waddani Ee Ceerigaabo, Kana Hadlay Sida Aan Looga Faa’iidaysan Khayraadka Gobolka Sanaag Iyo Waxa Uga Qorshaysan Xisbiga Waddani | Warsugan News
Home Uncategorized Musharax Cabdiraxmaan Ciro Oo Khudbad U Jeediyey Taageerayasha Waddani Ee Ceerigaabo, Kana Hadlay Sida Aan Looga Faa’iidaysan Khayraadka Gobolka Sanaag Iyo Waxa Uga Qorshaysan Xisbiga Waddani
Musharax Cabdiraxmaan Ciro Oo Khudbad U Jeediyey Taageerayasha Waddani Ee Ceerigaabo, Kana Hadlay Sida Aan Looga Faa’iidaysan Khayraadka Gobolka Sanaag Iyo Waxa Uga Qorshaysan Xisbiga Waddani
“Waxa Noogu Jira Barnaamijka In Aanu Dhamaystirno Waddada Ceerigaabo Ee Qabyada Ah Ee Halkii Xirsi Kaga Tagay Wali Joogta” Musharax Cabdiraxmaan Ciro
Ceerigaabo, ( Warsugannews) – Musharaxa Madaxweyne ee xisbiga Waddani Dr Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Ciro) ayaa sheegay in aan laga faa’iidaysan khayraadka uu hodonka ku yahay gobolka Sanaag ee ay ka midka tahay dhirta laga qoro Looxa, Macdanaha kala duwan, Beeyada iyo Dalxiiska gobolkaasi.
Murashax Cabdiraxmaan Ciro waxa uu tilmaamay in wax ka qabashada dhamaan arimahaasi ay ku jiraan Barnaamijka xisbigiisa marka ay talada dalka guulaystaana hirgalintooda ay ku dhaqaaqi doonaan.
Musharaxa Madaxweyne ee xisbiga Waddani waxa uu sidaasu ku sheegay khudbad dheer oo uu shalay u jeediyey Taageerayasha xisbiga Waddani ee magaalo madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo, waxaanu intaasi ku daray inay qorshaha ugu jirto dhamaystirka Waddada Ceerigaabo oo uu tilmaamay inay qabyo tahay oo halkii Xirsi Cali Xaaji Xasan uu kaga tahay ay wali joogto.
Musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Ciro) oo arimahaasi ka hadlayaana waxa uu yidhi “Dhamaan shacabka gobolka Sanaag, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Horaan u sheegay waxaan idhi Ceerigaabo mar hore ayay codaysay, maantana waxaad xaqiijiseen inaad codayseen.
Walaalayaal, himilada Xisbiga Waddani waa inuu mideeyo shacbiga Somaliland oo la helo shacbi siman oo wax walba ka siman oo xuquuqda ka siman oo derajada ka siman oo xilalka ka siman, himiladayadu waa taas. Himilada xisbiga Kulmiye waa jeegaan, jeegaantu miyey ina-wada qaadaa, anagu waxaanu ku bedelaynaa jeegaanta midnimo, saw midnimada ma taageerno, saw Somaliland midaysan ma taageerno, saw Somaliland aan jeegaan ahayn ma taageerno.
Walaalayaal gobolkani waa gobolkii ay ka soo jeedaan Awowyaasheenii aynu ka soo farcanay, kuna aasan yihiin, waa halkay ka bilaabanto taariikhda Somaliland, gobolkani waxa uu leeyahay taariikhdaasi weyn waa halkay Somaliland ka unkantay.
Somaliland waxay ka bilaabantay gobolka Sanaag, hadaynu abtirsano dhamaan awowyaasheen halkanay ku aasan yihiin, sidaa daraadeed gobolkani wuxuu inoo leeyahay, muhiimad weyn oo taariikhi ah, waa halkay ka bilaabmaysay taariikhdii Somaliland. Gobolkani waa halka dhul ahaan ugu weyn Somaliland, gobolkani waxa uu leeyahay khayraad farabadan, wuxuu leeyahay badd weyn oo dheer, wuxuu leeyahay dekedo caan ah oo Xiis iyo Maydh ka mid yihiin oo taariikhdeena ka mid ah, waa gobol ku haboon kalluumaysiga iyo in laga faa’iidaysto khayraadka badda.
Barnaamijka xisbiga Waxa ku jira in dhamaan dekedihii caanka ahaa la soo nooleeyo oo ay ku jiraan Xiis iyo Maydh, Barnaamijka xisbiga waxa ku jira inaynu kobcino khayraadka badda si aynu uga faa’iidaysano. Gobolkani waxa uu leeyahay khayraad aynaan ka faa’iidaysan oo ah Loox, barigii iigu dambaysay ee Somalia aan ka shaqayn jiray Looxa ugu badan ee laga sameeyo Furniture-ka waxa laga keeni jiray gobolka Sanaag, kamaynaan faa’iidaysan hadaynu Somaliland nahay, insha Allaahu Barnaamijkayaga waxa ku jira in Looxa aynu ka faa’iidaysano oo Warshado Looxa iyo Waraaqda cadcad ee aynu isticmaalno laga sameeyo gobolka Sanaag.
Gobolka Sanaag waa gobolka ugu khayraadka badan Xoolaha nool marka la eego ee aynu dhoofino, wuxuu leeyahay dhul aad u balaadhan oo ku haboon in si casri ah loogu dhaqo xoolaha, insha allaahu waxaynu bedeli doonaa sidaynu xoolaha u dhaqano, waxaanu noqon doonaa gobol qaniya oo hilibka iyo xoolahaba aynu ka soo saarno.
Gobolkani wuxuu leeyahay khayraad aynaan ka faa’iidaysan oo Beeyada ah, Beeyadu waxay ka mid tahay waxyaalaha ugu qaalisan dunida, insha Allaahu Beeyada laga tahriibin maayo halkan, Warshadaha Beeyada halkan ayaa laga samayn doonaa hadii illaahay ka dhigo.
Gobolkani waxa uu leeyahay macdano farabadan oo aynaan sinaba uga faa’iidaysan, dadku waxoogaa dhagxaan ah ayay ka gurtaan gobolka Sanaag, laakiin waxaynu u baahanahay nooguna jirta barnaamijka sidii khayraadkaa macdanta looga faa’iidaysan lahaa hadii Illaahay ka dhigo.
Qorshaha waxa noogu jira maadaama oo gobolka Sanaag uu yahay gobolka ugu fog marka la eego Caasimada in madaarkii Ceerigaabo la dhigo, hadii madaar la helana waxaanu dhiirigalin doonaa dalxiisayaasha ama Somaliland ama Dunidaba in halkani noqoto xarunta dalxiiska Somaliland, waxa noogu jira barnaamijka in aanu dhamaystirno waddada Ceerigaabo ee qabyada ah ee halkii Xirsi kaga tagay wali joogta.”
Previous PostSomaliland Wasiir Cali Mareexaan Oo muujiyay Cududiisa Taageero Ee Uu Ku Leeyahay Goboladda Bariga Oo Dhan Next PostDaawo:Musharax Muuse Biixi Oo Uga Mahadnaqay Shacabka Gar Adag Sida Ay U Taageersan yihiin Xisbiga Kulmiye